ဖုန်မှုန့်စားစက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုတန်ဆာ China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:စက်ရုပ် Shell ကပျော်စေ,အဆိုပါဖုန် - စုပ်ယူစက်ရုပ်ရှဲလ်,ဖုန်မှုန့် - စက်ရုပ် Shell ကစုပ်ယူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > ပလပ်စတစ်မှို > ပလပ်စတစ် Injection ကိုပလပ်စတစ်မှို > ဖုန်မှုန့်စားစက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများ Injection ကိုတန်ဆာ
မြေမှုန့် - စက်ရုပ်ခရုခွံ, မြေမှုန့်စုပ်ယူ - စုတ်ယူခြင်းစက်ရုပ်နှင့်သိမ်းကျုံးစက်ရုပ် - စုပ်ယူစက်ရုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု, ပြီးသားလူ့မိသားစု၌ထငျရှားစက်ရုပ်လူတွေဟာမြေမှုန့်ဖို့ ပို. ပို. လက်ခံကြသည်။ နည်းပညာအပြင်, ဖုန်စုပ်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုလည်းအရေးကြီးပါသည်။ ကြောင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းစက်ရုပ်၏အထူးငှါ, သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ် shell ကိုမြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုလျှပ်စစ်လျှပ်ကာနှင့်တောက်ပဖြစ်ရမည်။
Acrylonitrile Butadiene Styrene ပလပ်စတစ် (ကို ABS) ပစ္စည်းမြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွန်အားကိုမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ, မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်း, မြင့်မားသောင့်လင်းမြင်သာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး, နှင့်လေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်၏ shell ကို၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
အိမ်သူအိမ်သားစက်ရုပ်၏အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူများအများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာရုံစိုက်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်ပါတယ်။ စက်ရုပ်စုဆောင်းမြေမှုန့်မှုန့်ကိုသိုလှောင်မှု box ကိုရှင်းလင်းစွာကပွင့်လင်းပစ္စည်းနှင့်အတူမြေမှုန့်နှင့်ပြည့်စုံသည်ရှိမရှိကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။